Salama daholo, te hahafantatra ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny fiompiana ronono ve ianao? Raha eny dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe e Gopala App. Io no fampiharana Android farany, izay manome ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny vokatra vita amin'ny ronono.
Ny fiompiana ronono dia iray amin'ireo rafitra lehibe indrindra amin'ny fambolena maneran-tany. Isan'andro, ronono maherin'ny 600 tapitrisa taonina no ampiasaina eran-tany. Saika ny firenena rehetra no mampiasa ronono ho sakafo fototra na tsy maintsy ilaina mba hamenoana ny sakafo rehetra.
Noho izany, India dia iray amin'ireo firenena mpamokatra ronono lehibe indrindra. Saingy noho ny farihy fampahafantarana dia misy fiantraikany foana ny famokarana ronono ary indraindray misy fiantraikany amin'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny ronono ny fiompiana tsy ilaina. Misy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny biby mihitsy aza izany. Noho izany, ny governemantan'i India dia manolotra ity fomba farany ity hanomezana fahalalana sy fampahalalana momba ny fambolena.
Izy io dia manome ny endrika tsara indrindra ho an'ny tantsaha, ahafahan'izy ireo mahazo ny fanampiana ilaina rehetra. Manome endrika hafa koa izy io, izay ahazoan'ny tantsaha tombony. Izahay dia hizara ny fiasa sy serivisy an'ity fampiharana ity aminareo rehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay hahita ilay fampiharana.
Topimaso momba ny App E Gopala
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'i NDDB. Izy io dia manome ny rafitra fampahalalana tsara indrindra ho an'ireo tantsaha mpamokatra ronono mba hampitomboana ny famokarana ronono, hihazonana ny fahasalaman'ny biby, ny fiompiana kalitao, ary ireo endrika maro hafa. Iray amin'ireo dingana tsara indrindra avy amin'ny governemanta ny fampitomboana singa lehibe eto amin'ny firenena.
Manolotra sokajy samihafa izy io, amin'ny alalàn'ny mpampiasa mampiasa azy mora foana. Ny sokajy voalohany dia ho an'ny sakafon'ny biby, izay ahalalana ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny sakafo. Hanome sakafo isan-karazany izy io, izay hampiakaran'ny biby ny ronono, ny lanjan'izy ireo ary ireo lafin-javatra tsara hafa.
Ny sokajy ara-pahasalamana, amin'ity sokajy ity, dia misy ny fanafody ilaina rehetra. Ny fanafody rehetra dia raokandro, izay manome voka-dratsiny kely indrindra. Azonao atao koa ny mahafantatra momba ny otrikaretina, ny viriosy ary ny aretina virosy.
Misy endri-javatra hafa koa ny e Gopala Apk, izay rafitra fampahafantarana haingana. Araka ny nozarainay dia fampiharana novolavolain'ny governemanta izany. Noho izany, izay drafitra vaovao na fihenam-bidy dia hanome fampahafantarana haingana ho anao, izay ahafahanao mahazo tombony amin'izany. Izy io dia hanome ny tetika rehetra, dia ny sampana mifandraika amin'ny fiompiana, ny ronono ary ny mpanjono.
Raha te hiditra amin'ireo endri-javatra ireo sy ny maro hafa dia mila mampiasa an'ity rindranasa Android ity ianao. Ity rindranasa ity dia tsy misy afa-tsy ho an'ny olom-pirenena indiana ary mila fampahalalana kely ihany koa izy io hahazoana fahazoana miditra amin'ity fampiharana ity
Rehefa vita ny dingana fametrahana dia tsy maintsy mamela ny fahazoan-dàlana ilaina rehetra ianao. Ny voalohany sy manan-danja indrindra dia ny laharana finday. Tsy maintsy manome laharana finday mavitrika ianao, avy eo tsy maintsy mameno fepetra hafa. Hisy OTP halefa any amin'ny laharan'ny findainao, izay tsy maintsy hamarininao. Rehefa vita ny fanamarinana dia afaka mampiasa ity fampiharana ity ianao.
Anaran'ny fonosana coop.nddb.pashuposhan
Ireo no endri-javatra tsara indrindra ho an'ny mpamboly ronono rehetra. Ny sasany amin'ireo endri-javatra voalazanay tao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity aminareo rehetra izahay.
Ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny Sakafo biby
Fomba fitsaboana ahitra amin'ny pitsopitsony
Rafitra fampandrenesana haingana
Izahay koa manana fampiharana mitovy aminao.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary mizara an'ity rindranasa ity amin'ity pejy ity koa izahay. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana izay hita eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
E Gopala App Ho an'ny fitaovana Android dia misy izao. Alohan'ny kinova Android dia mila mitsidika ny tranonkala ofisialy ianao hahazoana ny vaovao. Noho izany, fantaro fa nanamora ny fampiasan'ny mpampiasa ny governemanta. Noho izany, sintomy ity app ity ary alao maimaim-poana ireo serivisy rehetra.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags E Gopala Apk, E Gopala App, E Gopala App Ho an'ny Android Post Fikarohana